स्वस्थानी देखि वेद र गीतामा समेत इशाईकरण ! यस्तो छ सनातन धर्मप्रतिको डरलाग्दो आक्रमण
२ माघ २०७५, बुधबार १६:३६
२ माघ बुधबार क्यानडानेपाल डट टिभी : पछिल्लो अवस्थामा नेपालमा इशाईकारण बेस्सरी बढेको छ । इशाईकरण जबर्जस्ति लादिएर यहाँको सनातन धर्महरु (हिन्दु ,बुद्ध, किराँत) लाई सखाप पार्ने इशाईहरुको पछिल्लो खेल अन्तरगत हिन्दुहरुको श्री स्वस्थानी किताबमा समेत बाइबलका हरफहरु मिलाएर यशुको वर्णन गरिएको छ ।
बजारमा यतिखेर विभिन्‍न प्रकाशनका ‘श्रीस्वस्थानी कथा’ का पुस्‍तक बिक्री भइरहेका छन्। जसमध्ये बाबु माधवप्रसाद शर्माको प्रकाशनमा रहेको ’श्रीस्वास्थानी कथा’ मार्फत क्रिस्चियन धर्म प्रचार भइरहेको तथ्य फेला परेको हो । यो प्रकाशन गृह के २३र१११, दूधविनायक, वाराणसी–१ भारतमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
माधवप्रसाद शर्मा निर्वाचन आयुक्त इला शर्माका पिता हुन्। तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री देवशमशेर पदच्यूत भएपछि बनारस जाँदा सँगै गएका पुरेत थिए, धादिङका पण्डित भवनाथ शर्मा रेग्मीका छोरा हुन् छोरा सागर शर्माको बुवा माधवप्रसाद । भवनाथले उतै घरजम गरेर उनका छोरा माधवप्रसादले बनारसमा प्रकाशनगृह खोलेका थिए । अहिले त्यहि प्रकाशनलाई गृह स्व. माधवप्रसादका छोरा सागर शर्माले सञ्‍चालन गरिरहेका छन्।
बाइबलका ६६ वटा ग्रन्थ छन्। जसमा २७ वटा नयाँ नियम र ३९ वटा पुराना नियम भनेर उल्लेख गरिएको छ। नयाँ नियमअन्तर्गत यिसुख्रिस्टसँग हिँड्ने चेलाहरुको यिसुख्रिस्टको विषयमा दिएको सन्देश राखिएको छ। जसमध्ये चारवटा मति २७–५६, मर्कुस १५–१६-४१, लुका २३ : ६–५६, यूहन्‍ना १९ : १६–४२ मा भएका कुरा समेटेर यस टिप्पणीअन्तर्गत राखिएको छ।
यो पुस्तक बजारमा भएका अन्य प्रकाशनका पुस्तकको तुलनामा सस्तो समेत बनाइएको छ। एक पुस्तक विक्रेताका अनुसार अहिले विभिन्‍न प्रकाशनका स्वस्थानीको पुस्तकमध्ये सबैभन्दा बढी यो नै बिक्री भइरहेको छ। यो अन्‍य पुस्तको तुलनामा सस्तो पर्ने भएकाले पनि बढी बिक्री भएको हो। यसको मूल्य २५० भारतीय रुपैयाँ पर्छ। जसलाई छुट दिएर ३६० रुपैयाँमा बिक्री भैरहेको छ ।
राजधानीमा रहेका अधिकांश पुस्तक पसलमा यो पुस्तक बिक्री वितरण भइरहेको छ। विशेष गरी नेपालि हिन्दु भएको क्यानडा, अष्ट्रेलियामासमेत यसको बिक्री वितरण ब्यापक रुपमा भइरहेको छ। यसरी षड्‍यन्त्रपूर्ण रुपमा हिन्दु धर्मको अपमान हुने किसिमले स्वास्थानीमा राख्‍नु ठूलो अपराध हो। यसरी हिन्दु धर्ममाथि प्रहार भइरहँदा पनि सरकारी तवरबाट मौनता साँध्‍नु झनै गम्भीर विषय बनेको छ।
स्वास्थानी व्रतकथा हिन्दुहरुले शताब्दीऔंदेखि घरघरमा माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि फागुन शुक्ल पूर्णिमासम्म एकचित्त र एकाग्र भई एकछाक मात्रै खाएर व्रत बसी वाचन गर्ने र सुन्दै आएका छन्। यसमा लेखिएका हरेक कुराले उनीहरुको मानसपटलमा गहिरो छाप राख्‍ने भएकाले हिन्दु धर्मको अपमान हुने किसिमले स्वास्थानीकै किताबमा क्रिस्चियनको कथा राखिएको हुन सक्ने हिन्दुका वरिस्ठ व्यक्तिहरुको तर्क छ । उनीहरुको तर्क छ , ‘हिन्दुको खोल ओढेर यसरी क्रिस्चियन धर्म प्रचार गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ। यसो गरिएन भने यो भाइरसजसरी फैलिनेछ।
नेपालको संविधानको धारा १७ (स्वतन्‍त्रताको हक) २ (१) खण्ड (क) मा लेखिएको छ, ‘कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय एकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन।’
त्यसैगरी २६ (धार्मिक स्वतन्त्रताको हक) को उपधारा ३ मा लेखिएको छ, ‘यस धाराद्वारा प्रदत्त हकको प्रयोग गर्दा कसैले पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने वा सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने क्रियाकलाप गर्न गराउन वा कसैलाई धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्का धर्ममा खलल पर्ने काम वा व्यवहार गर्न गराउन हुँदैन र त्यस्ता कुरा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ।’
यस अर्थमा हेर्दा उक्त पुस्तकको विक्रिमा नै प्रतिवन्ध लगाउनुपर्ने अवस्था संविधान अनुसार नै देखा परेको छ । तर, यसको लागि स्वयम् हिन्दुहरु नै अगाडी नबढी त्यसो हुने अवस्था पनि देखिन्न ।
एक अधिवक्ताका अनुसार पनि क्रिस्चियन धर्मको यस्तो बिगबिगी भइरहेका बेला हिन्दुको धार्मिक पुस्तकमा यसरी बाइबलको प्रचार गर्नु हिन्दु धर्ममाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो। धार्मिक कलह ल्याउनु अपराध हो। अपराध गर्ने जोकोहीलाई पनि कानुने छोड्नु हुँदैन यस्तै अन्य धर्म धार्मिक ग्रन्थ गीता र वेदमा पनि यस्ता सामग्री राखिएको भन्‍ने सूचना प्राप्त भएका छन्।
यस्तो लेखिएको छ स्‍वस्थानीको किताबमा
एक अनलाइनका अनुसार यसरी भइरहेका छन् नेपालमा क्रिस्चियन धर्म प्रचार –यसअघि मंसिर १५ देखि १७ गतेसम्म राजधानीमा विवादित संस्था युनिभर्सल पिस फेडेरेसनको आयोजना तथा नेपाल सरकारको सहआयोजनामा विश्‍वका अधिकांश मुलुकमा प्रतिबन्ध लगाइएका सरकार प्रमुखलाई बोलाएर क्रिस्चियन धर्म प्रचार गरेको भन्दै सरकारको निकै आलोचना भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो निर्देशनमा देशभरका जनप्रतिनिधिलाई कोरियाली महिला मदर मुनको हातबाट होली वाइन पिलाएर बाइबलका श्लोक उच्चारण गर्न लगाउनुका साथै मदर मुनको पाउ छुन लगाइएको थियो।
त्यसअघि १८ वैशाखमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई विद्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा बोलाएर एक एनजिओले दोलखामा उनैको हातबाट क्रिस्चियन धर्म प्रचारका सामग्री वितरण गर्न लगाएको थियो। जिल्लाको शैलुङलिका ८ स्थित शैलुगेश्वरको भैंसेमा विद्यालय भवन बनाएको ‘दयाका हातहरु’ नामक एउटा गैरसरकारी संस्थाले भवन उद्घाटन गर्न आमन्त्रण गरिएका उपराष्ट्रपतिकै हातबाट धर्म प्रचारका सामग्री बालबालिकालाई वितरण गराएको थियो।
अध्यागमन विभागको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो चार महिना अवधिमा नेपाल आएर धर्म प्रचारमा संलग्‍न १६३ विदेशी नागरिकलाई देश निकाला गरिएको छ। त्यसैगरी सचेतनामूलक तथा सामाजिक र सशक्तीकरणका कार्यक्रम गर्ने नाममा ग्रामीण जिल्लाका केही संघसंस्थालाई रकम दिएर परियोजनामार्फत धर्म प्रचारमा रकम बाँडेका समाचार पनि आउने गरेका छन्।
धर्मनिरपेक्षताको फाइदा उठाउँदै सर्वसाधारणको घरघरमा गई आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने, हिन्दु, धर्मग्रन्थ र देवीदेवतामाथि लान्छना लगाई आफ्नो धर्मप्रति आकर्षित गर्न खोज्ने प्रवृत्ति निकै बढिरहेको छ। बाटो हिँड्दै गर्दा पनि प्रभुको सन्देश भन्दै किताब बाँड्‍ने बटुवालाई दिक्क बनाइरहेका घटना पनि अब कुनै नौला रहेनन्। यसरी आक्रामक रुपमा क्रिश्चियन धर्मको प्रचार भइरहँदा पनि सरकारले पनि कुनै ठोस कदम चालेको छैन। उल्टै धर्म प्रचारका कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता जनाइरहेको छ।
यसरी हिन्दु धार्मिक पुस्तकको खोलमा बाइबल तथा क्रिस्चियन धर्म प्रचारका सामग्रीले धार्मिक विद्वेष फैलाउनुका साथै धार्मिक सहिष्णुतामा खलल पार्नेछ। यस्ता क्रियाकलापलाई समयमै रोक्न जरुरी छ। समाजमा धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्‍नु सबैको दायित्व हो।
यो लेख विभिन्न अनलाइनलाई र तथ्यलाई आधार मानेर लेखिएको हो । यसमा तपाइँ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ